पशुपंक्षी उद्यमीको नजरमा बजेट: सारसलाई प्लेटमा सुप दिएजस्तो | Vetkhabar
Home कृषि पशुपंक्षी उद्यमीको नजरमा बजेट: सारसलाई प्लेटमा सुप दिएजस्तो
पशुपंक्षी उद्यमीको नजरमा बजेट: सारसलाई प्लेटमा सुप दिएजस्तो
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ । यसका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।तर सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षित गरिएको गुनासो गरेका छन् । आत्मनिर्भर घोषणा गरिएका पोल्ट्री क्षेत्रलाई त अझै उपेक्षित र निराश पार्ने काम गरिएको उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
हामीले पशुपन्छी तथा पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमीहरूसँग आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौं । यसबारे पशुपन्छी क्षेत्रका उद्यमीले दिएको प्रतिक्रिया उहाँहरूकै शब्दमाः–
गुणचन्द्र विष्ट अध्यक्ष,नेपाल पोल्ट्री महासंघ
सारसलाई प्लेटमा सुप दिएजस्तो
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । पहिलो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले यसरी बजेट नै ल्याउन मिल्दैनथ्यो । विधि र प्रक्रिया मिचेर असंगत काम भएको छ ।
विगत वर्षमा हामीले बजेटअगावै चासो राख्ने गरेका थियौं । अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, अर्थ र कृषिका सचिव, योजना आयोगलगायतमा पोल्ट्री र ह्याचरी क्षेत्रमा यी–यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर लिखित रूपमै सुझाव दिन्थ्यौं । देशको भद्रगोल पारा र यो सरकारबाट बजेट ल्याउने कानूनी आधार नदेखेपछि यसपालि हामी कहीँ गएनौं ।
हामीले सुझाव नदिए पनि राज्यका निकाय हाम्रो समस्याबारे जानकार नै थिए । सम्बोधन गरिदिएको भए जाती हुन्थ्यो । तर कृषि क्षेत्रअन्तर्गतको पोल्ट्री र ह्याचरीलाई पूर्णतः उपेक्षित गरिएको छ ।
सरकारले कृषिलाई अति संवेदनशील राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग भनेको छ । तर सुविधा र सहुलियत केही छैन । सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायीकरण र औद्योगीकरणको गफ दिने गरेको छ ।
तर सरकारले आफ्नो भनाइअनुसारको व्यवहार बजेटमा देखाएको छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस आत्मनिर्भर भएको, देशको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कृषिलाई मात्र ३ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यो सरासर कृषि क्षेत्रमाथिको उपेक्षा हो । फोस्रो आश्वासनले मात्र कृषि कसरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
पोल्ट्रीकै कुरा गरौं । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएर यो क्षेत्रलाई आत्मििनर्भर घोषणा गर्नु भएको छ । तर पोल्ट्रीलाई थप समृद्ध नगरी यही अवस्थामा छाड्ने हो भने यो क्षेत्र आत्मनिर्भर भइरहन सक्दैन । किनभने, बढ्दो मागलाई धान्न त्यहीअनुरूपको योजना सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।
दुर्भाग्य यसतर्फ सरकारको नजर परेको छैन । सस्तो लोकप्रियता हासिल गरेर कसरी हाईहाई हुने भन्नेमा मात्र सरकारको ध्यान छ । बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम र योजना पनि परिपक्व र प्रभावकारी दुवै छैनन् । आँखामा छारो मात्रै हालिएको छ । जस्तोः ह्याचरी यन्त्र आयातमा घोषणा गरिएको छुट । त्यसमा अहिले १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यो सरासर ह्याचरी क्षेत्रको उपेक्षा हो ।
त्यसैगरी तरकारी, मासु र माछा ढुवानी अनुदानका नाममा पनि सरकारले उस्तै उडन्ते कुरा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यसको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भनेका छन् । तर यो कसरी उपलब्ध हुने हो ? कुनै ठोस र प्रष्ट खाका देखिँदैन । यसर्थ कृषि क्षेत्रका लागि यसपटक ल्याइएको बजेट सारसलाई प्लेटमा राखेर सुप दिएजस्तै हो । सरकारले बजेट ल्याएर बिरालो बाँध्ने कामबाहेक अरू केही गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघ
समग्रमा बजेट चुनावलक्षित छ
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमकिता दिएको भनिए पनि ठोस कार्यक्रम छैन ।बजेटले दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी तथा तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ । ५ वर्षभित्र देशलाई आवश्यक चामल उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यो कार्यान्वयन भए स्वागतयोग्य छ ।
सिंचाइ आयोजनाहरू थप भएका छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ अत्यावश्यक छ ।
वृद्ध भत्ता ४००० पुर्याउनु र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु राम्रो हो । तर २००० तलब वृद्धि अति न्यून हो, मूल्यवृद्धिको तुलनामा । कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।
पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक फिड सप्लिमेन्ट तथा डिस्इन्फेक्सन र वाटर स्यानिटाइजर मा भन्सार छुटका लागि हाम्रो आग्रहमा कुनै ठोस निर्णय भएन । मासुमा आत्मनिर्भर भनिएता पनि पोल्ट्री क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन ।
रवीन पुरी अध्यक्ष, नेपाल दाना उद्योग संघ
अर्थ सचिवले आश्वासन मात्र दिनु भो
कुखुराको दानाका लागि अहिले दोस्रो मुलुकबाट मकै र भट्मास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दानाका लागि आवश्यक मकै र भट्मास विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कले दाना महँगो हुने गरेको छ । अहिले भट्मासमा मात्रै प्रतिकिलो ११ रूपैयाँसम्म भन्सार लाग्छ ।
मकै र भट्मासमा लाग्ने भन्सार शुल्कले कुखुरा उत्पादको खर्च बढेको छ । उत्पादन खर्च बढेपछि स्वभाविक रूपमा त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्छ ।
बजेट निर्माण तयारी सुरु भएसँगै हामीले यही अवस्था दर्शाएर कृषि सचिवलाई भन्सार छुट गरिदिन सुझाव दिएका थियौं । उहाँले निकै सकारात्मक रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नु भएको थियो ।
हामीलाई लागेको थियो, यसपटक त अवश्यक पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ । तर हाम्रो चासो सम्बोधन नगरेर निराश पार्ने काम भएको छ । १ खर्ब ५० अर्ब लगानीको क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको छ ।
शिवराम केसी अध्यक्ष ,अण्डा उत्पादक संघ
कृषिमा उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रम आएन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको छ । बजेटबारे मिश्रित धारणाहरू आइरहेका छन् ।सरकारले उत्कृष्ट बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि कृषिमा त्यस्तो उल्लेखनीय केही पनि देखिँदैन । पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय थिए ।
तर एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम पारिएन ।पोल्ट्री देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन आत्मनिर्भर क्षेत्र हो । यसलाई पनि निराश पार्ने काम सरकारबाट भएको छ ।
Previous articleबजेटमा पशुपन्छी क्षेत्र : खोपमा आत्मनिर्भरदेखि कृत्रिम गर्भाधानसम्म
Next articleनेल्टाले भन्यो– पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप देऊ,संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर
भेट टाइम्स मासिक दशै विशेष
पशु चिकित्सा अध्ययनरत विद्यार्थीको हत्या दोषीमाथि कारबाही गर्न संघको माग
पत्रकारिता छाडेर कुकुरसँग रमाउँदै गोविन्द
बजेटबारे भोलि विज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्दै नेभ्ला
कोरोनाबाट जाेगिन पशुपन्छी औषधी व्यवसायीको आह्वान, संघकाे सगरमाथा शाखा अधिवेशन स्थगित
न्यूहोपको दादागिरी : अवैध एमबीएम नेपाल भित्र्याउने प्रयास असफल